Mariinis-ka Talyaaniga oo bad-baadiyey muhaajiriin u kala dhashay Afrika iyo Barriga dhexe – Radio Daljir
Mariinis-ka Talyaaniga oo bad-baadiyey muhaajiriin u kala dhashay Afrika iyo Barriga dhexe
Luulyo 31, 2013 5:37 b 0
Schiles, July 31, 2013 – Dowladda Talyaaniga ayaa mar kale bad-baadisay boqolaal muhaajiriin ah oo doonayey in ay si sharci daro ah ku galaan dalalka Qaarada Yurub, iyagoo ka soo cararay dalal ka tirsan Afrika iyo kuwa Barriga dhexe oo colaado ka aloosan yihiin.
Ciidamada Badda ee Talyaaniga ayaa qabtay oo gacan bad-baado u fidiyey 116 muhaajiriin ah, kuwaasi oo doon ka soo raacay dalka Giriiga, iyagoo ku sii jeeday dhinaca Talyaaniga si ay u helaan nolol dhaanta mida dalalkii ay ka soo carareen.
Wakaalada wararka Talyaaniga waxay faafisay in dadkaasi muhaajiriinta ay isugu jireen, Soomaali, iyo dad u dhashay dalalka Ciraaq iyo Siiriya, waxayna dhamaantood ka yimaadeen dalka Giriiga, wararku waxay intaas ku darayaan in dadka la bad-baadiyey ay ?ku jireen 37 caruur ah iyo 22 haween ah.
Ciidamada Badda Talyaaniga ayaa dadkaasi waxay ku qabteen meel ku dhow xeebaha Schiles ee koonfurta Talyaaniga, haweenka qaarkood ayaa xaaladooda caafimaad waxay ahayd mid liidata, waxaana haatan lagu dabiibayaa cisbital ku yaala Schiles.
Dalka Talyaaniga waxaa sanadihii tegey ku sii qul-qulayey dadka Tahriibayaasha oo ay Soomaalidu ugu badan yihiin, waxaa inta badan dadkaasi Italy ay ka galaan dhanka dalka Liibiya, balse waxaa mar kale Talyaaniga ku soo furmay muhaajiriinta ka imanaya Barriga dhexe, gaar ahaan Ciraaq iyo Siiriya.
Qaban-qaabada shirka Isimada Puntland ee magaalada Qardho oo gebo-gebo maraya (Dhegeyso)
Puntland oo fasaxday shaqaalaha xili uu socdo diyaar-garowga 15 sano guuradii maamulka (Dhegeyso)